Maaskarooyinka Wajiga | Face coverings, masks and COVID-19 (Somali) | Multnomah County
Maaskarooyinka Wajiga | Face coverings, masks and COVID-19 (Somali)
Waxaa la cusbooneysiiyey Ogosto 4, 2020
Haddii aad bannaanka aadeyso, xiro maaskarada wajiga marka kasta oo aadan dadka kale ka fogaan karin 6 fiit. Tusaale ahaan, gudaha dukaanka, marsha biyeediga dadka ku badanyihiin ama gaadiidka dadweynaha.
Xirashada maaskarada wajiga waxay caawineysaa inaad ilaaso caafimaadkaaga iyo caafimaadka dadka kaa ag dhow.
Laga bilaabo Juun 24, waxaa la waajibiyay in la xidho waji dabool meelaha dadku ay iskugu yimaadaan ee gudaha ah ee Degmada Multnomah. Tani laakiin ma khusayso caruurta ka yar 5 jirka, iyo dadka qaba xanuuno ama laxaad la’aan ka hor istaagaysa inay xidhaan waji dabool.
Maaskarooyinkga marada ka sameysan MA AHAN kuwa beddeli kara kala fogaanshaha bulsheed:
Guriga joog inta ugu badan oo ugu macquulsan
Dadka kale ka fogoow illaa 6 fiit marka la joogo meelaha dadka ku badanyihiin
Wajigaaga ha taabanin
Dabool markaad qufaceyso ama hindhiseyso
Haddii aad xannuunsantahay, guriga joog oo ka fogoow dadka kale si aad u ilaaliso
Shaqaalaha, qandaraaslayaasha iyo dadka sida bilaashka ah ku shaqeeya ee gudaha Oregon hadda waxaa looga baahanyahay iney maaskaro ku xirtaan goobta shaqada. Ganacsigana sidoo kale wuxuu macaamiisha uga baahnayahay iney xirtaan maaskaro si loo ilaaliyo shaqaalaha.
Shuruudaha maaskarada laguma dabaqayo dadka aan xiran karin maaskarada sababo caafimaad dartood, da' ama naafanimo. Waa inaadan takoorin dadka aan xirran karin maaskarada.
Sharciga Maaskarada Wajiga ee Oregon
Haddii aad ka walaacsantahay qofka aad u shaqeyso iyo isticmaalka maaskarada, ka wac Maamulka Caafimaadka iyo Badqabka ee Oregon (OSHA) lambarkaan 800-922-2689.
Sidee loo adeegsadaa maaskarada marada ka sameysan
Marka aad xiraneyso maaskaro maro ka sameysan, iska hubi:
Inaad gacmahaaga nadiifiso ka hor inta aadan xiranin, iyo kadib markaad taabato ama aad iska furto
Inaad adeegsato xargaha iyo laastiiga dhegaha si aad u xirato ama iska furto
In afkaaga iyo sankaagaba ay si buuxda udaboolanyihiin
In si wanaagsan ay ula egtahay dhinacyada wajigaaga, oo ayna jirin wax duleelo ah
In aad si wanaagsan uneefsan karto
Maaskarada marada waxay noqon kartaa mid cucun sababta. Gacantaada gudaha ha galinin si aad u taabato sankaaga ama afkaaga.
Dhaq maaskarada kadib markasta oo aad isticmaasho adigoo adeegsanyo saabuun iyo biyo diiran.
Markastoo ay dunta isku dhowdahay oo maradana tahay mid qaro weyn leh, waa ay ku fiicantahay iney lekaato wajigaaga oo ayna kaa ilaaliso caabuqa. Waa ineysan ahayn mid aad qaro weyn uleh, haddii kale waxay noqoneysaa mid aan raaxo lahayn.
Marka aad dooraneyso maaskarada wajiga, raadi:
Dun isku dhow, marooyin 100% dun ka sameysan sida go'yaasha sariirta, daahyada, shaatiyaasha la tolay
Ugu yaraan iney tahay 2 maro is dulsaaran
Iska hubi inaad ka neefsan karto
Xarig laastiig ah ama xariga caadiga ee laga xirto
Qeybta birta ah ee la dhaqi karo ee lagu dhax tolay, oo loogu talagalay iney si wanaagsan kuula ekaato (biinka warqadaha lagu dhajiyo oo caag ku daboolan waa mid la isticmaali karo)
Maaskarooyinka qaar waxay leeyihiin hal ama labo dabool wax filtareeya oo ka sameysan maro adag. Filtaraha kafeeyga waa la isticmaali karaa haddii aad soo saari karto si aad udhaqdo. Ha adeegsanin filtarayaasha loo yaqaano HEPA sida baakadaha loogu tala galay qalabka nadiifinta ee korontada ku shaqeeyo. Kuwaasi waxaa laga yaabaa iney sumeysanyihiin.
Tijoobo samey si aad u hesho nooca kuugu wanaagsan. Ma xiran kartaa xariga laastiiga ka samesan ee dhega la gashto? Ama waxaad doorbideysaa xariga madaxa lagu xirto?
Haddii aad sameysaneyso kaaga, adeegso waxyaabo aad marka horeba heysatay (go'yaal hore, shaatiyaal, fasaleetiyada madaxa lagu xirto, shukumaanada shaaha). Mararka qaar waxyaabaha, sida laastiiga iyo marada adag ee ¼”, ayaa laga yaaba iney adagtahay in laga helo dukaamada.
Sidee loo sameeyaa maaskarooyinka marada ka sameysan ee guryaha lagu sameeyo (CDC)
Dadweynaha guud waa ineysan xiranin maaskarooyinka caafimaadka ama maaskarooyinka N95.
Shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa ubaahan maaskarooyinkaan caafimaadka si ay si aamin ah ugu gutaan shaqaoyinkooda.
Maaskarooyinka caafimaadka helitaankooda waa mid xaddidan waxaanna ubaahanahay inaan hubino kuwaas iney adeegsadaan kaliya shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee safka hore ka shaqeeya.
Waa Kuma Qofka ay tahay Inuusan Xiranin Maaskarda Wajiga
Xasuusnoow, dadka qaar ma xiran karaan maaskarada wajiga iyadoo ay sabab u tahay xaalado caafimaad, da' ama naafanimo. Carruurta da'dooda ka yartahay 2 sano waa ineysan xiranin maaskarooyinka wajiga, ama qof kastoo aan iska furi karin maaskarada.
Takooridda Waxay Ka Hor Imaaneysaa Sharciga
Qof kasta wuxuu mudanyahay xushmad, haddii ay xiranyihiin maaskarada wajiga iyo haddii kaleba.
Rabshadao iyo takoorid waa waxa ay maalinka kasta la kulmaan dadka Madow, dadka Dhaladka ah, iyo bulshooyinka Dadka Midabka leh. Falcelinada cusuriyadda iyo cunsuriga ee ku aadan dadka Madow, Dadka Dhaladka ah, iyo Dadka Midabka leh ee xiran maaskarada wajiga waa xaqiiq ka jirta xaaladda hadda lagu jiro. Walina waan ognahay maaskarooyinka wajiga waxay dadka ka caawin karaan iney caafimaad qabaan oo nolol badbaadiyaan. Degmada Multnomah uma dulqaadaneyso takoorid ama rabsahad ka dhan ah jinsiga, qowmiyadda, ama aqoonsiga.
Degmada Multnomah waxay aqbaleysaa tabarrucaad dhanka maaskarooyinka wajiga ee marada ka sameysan iyo maaskarooyinka caafimaadka.